Adiresy: Recoleta, faritra metropole, Chile;
Haavo: 860 m.
Iray amin'ireo toerana malaza indrindra ao Santiago , renivohitr'i Chile , ny Mount San Cristobal. Toerana mahafinaritra mpizaha tany malaza io tanàna io. Ilay tendrombohitra dia malaza amin'ny fandraketana fandalinana eny an-tampony, toeram-pitsangatsanganana miaraka amin'ny fialamboly sy fialamboly samihafa.
Mount San Cristobal - famaritana
Ny haavon'ny tendrombohitra dia 860 m, eo an-tampony ny sarivongan'i Maria Virjiny, ny haavon'ny statue dia 36 m. Mitoetra amin'ny tanana maninjitra ny tanàna izy ary mitodika any amin'ny lanitra. Tsy mahagaga izany, satria ny Virjiny Masina no mpiaro an'i Santiago . Ny fampisehoana an-tsaha ho an'ny mpizaha tany dia mitaingina tendrombohitra. Ny tsotra indrindra ary angamba ny fomba mahaliana indrindra dia ny mandeha fiara mivantana mankany an-tampony mankany amin'ny sehatra mpijery. Fa ny fomba mahaliana sy mampientanentana ny fiakarana dia ny funicular na teleferic. Ny teleferikana dia fiakaran'ny ski, izay ampiasaina any amin'ny toeram-pialan-tsambo, toeram-pivoahana an-dàlam-be miisa ho an'ny olona 4. Ny fomba fijery misokatra rehefa sarotra ny mamaritra amin'ny teny. Tendrombohitra be tendrombohitra sy fahitana ireo faritra matory ao Santiago de Chile. Efa manakaiky ny tendrombohitra ny tranofiara dia mamakivaky ala mikitrok'ireo hazo izay nivadika ho zaridaina.
Inona no hijerena ireo mpizaha tany?
Miakatra eny amin'ny tendrombohitr'i San Cristobal, ianao dia afaka mahita atleta isan-karazany ary mahita fialamboly maro:
Mandritra ny fahavaratra, ny dobo an-jaridaina miaraka amin'ny faritra fialan-tsasatra dia ao amin'ny Parc San Cristobal. Ireo mpizahatany nijanona tao Santiago dia azo antoka fa nitsidika ny iray amin'ireo dobo. Eto no anaovana ny trangan'ny masoandro ary misy café misy zava-pisotro sy sakafo.
Ny vala ao an-tanànan'i Santiago, izay heverina ho anisan'ny lehibe indrindra any Amerika Latina, dia ao amin'ny Tendrombohitra San Cristobal. Manana biby tsy fahita firy sy vorona izay hita any atsimon'i Chili izy ireo ao amin'ny faritra miafina ao Patagonia .
Eo amin'ny tongotr'ilay sarivongana fotsy nalaina avy amin'i Maria Virjiny dia fandrakofam-pandinihana, ary teo ambanin'ny kianjam-bahoaka Metropolitano - toerana malaza indrindra amin'ny fandehanana any Santiago. Eto ianao dia afaka mihaino mozika, lalao filalaovana na manao yoga sy Pilates miaraka amin'ny mpampianatra maimaim-poana.
Ao amin'ny iray amin'ny tendron'ny Tendrombohitra San Cristobal no nanapaka toerana malalaka ho an'ny toeram-ponenana. Tonga eto izay te hiala ao an-tratran'ny natiora any anaty tranolay na mpanentana. Ny seza dia natao ho an'ny fiara fitaterana, misy toerana ho an'ny fandaniana ny alina sy ny basy, misy latabatra, seza, seza. Vetivety dia fivarotana fivarotana izay tena ilaina amin'ny fitsangatsanganana. Ny fiarovana ny zana-paritra dia arahin'ny sampan-draharaha manokana.
Mandeha eny an-tendrombohitra ianao, afaka mijanona eny an-dalana, mijanona ao amin'ny trano fisotroana kafe sy trano fisakafoanana. Hampifaly ireo mpitsidika azy ireo amin'ny sakafo Shiliana nasionaly izy ireo, ary koa ny sakafo Eoropeana, ny sakafo haingana sy ny biriky. Ny gourmets tena sy tia ny fisotroana tsara dia afaka mitsidika ny tranom-bakoky ny divay, izay hita ao amin'ny valan-tseranana ao amin'ny Tendrombohitra San Cristobal. Ny tranombakoka dia tsy manome afa-tsy ny fampisehoana mahaliana sy be dia be, fa mitarika koa ny fanandramana.
Tsy lavitra ny fiantsonan'ny fiaramanidina dia misy fivarotana tsotsotra, brochures momba an'i Chile , sarintany amin'ireo toerana malaza indrindra ao amin'ny firenena.
Ahoana no ahatongavako any San Cristobal?
Afaka miditra amin'ny tendrombohitra San Cristobal amin'ny fiara ianao amin'ny alàlan'ny fiara fitateram-bahoaka na amin'ny mandeha amin'ny moron-tongotr'izy ireo. Hisy fialam-boly ho an'ny mpivady amin'ny fitiavana, ary koa ho an'ny fianakaviana miaraka amin'ny ankizy, ary ny mpaka sary dia afaka manao sary mahafinaritra.
Kafe miaraka amin'ny cognac - ahoana no handrahoina, hisotroana araka ny tokony ho izy sy ny fomba tsara indrindra hahazoana misotro zava-pisotro mahamamo
Ny tarik'ireto volo - ny haingon-damosina tsara indrindra, ny fomba fitafy?
Herbicide avy amin'ny tsimparifary
Ahoana no hanamboarana elatra toy ny ao KFC?
Zana-katsaka avy amin'ny kankana
Famenon'ny ankizy amin'ny fahavaratra
Ahoana no ahafahan'ny ankizy mihinana?
Ahoana ny fomba hahatongavana ho mpanazatra ara-barotra?
Dresses chiffon hariva
Mahasoa ve ny kvass ao an-trano?
Ahoana no handraisana ny katsaka?
Jiro kilao ho an'ny trano
Fanaintainana amin'ny fadimbolana
Fanentanana ny lela